Iindaba-Ukwahlula-hlula kunye nokuSebenza kokuLawulwa koLawulo loXinzelelo lweRhasi
Inokwahlulahlulwa ibe ziindidi ezimbini: uhlobo olusembindini kunye nohlobo lweposi ngokwezixhobo ezahlukeneyo, lunokwahlulwa lube ziindidi ezimbini: inqanaba elinye kunye nenqanaba eliphindiweyo;
Umahluko unokwahlulwa ube ziindidi ezimbini: ukwenza okuhle nokwenza okungalunganga. Okwangoku, ukunciphisa okuxhaphakileyo koxinzelelo lwasekhaya ikakhulu kudityaniswa kuhlobo lwenqanaba elinye lokuphendula kunye nenqanaba lembini uhlobo lwe-hybrid (inqanaba lokuqala luhlobo lokubamba ngokuthe ngqo kwaye inqanaba lesibini luhlobo lokuphendula).
Inokwahlulahlulwa yenziwe ngentsimbi engenasici 316 yokulawula uxinzelelo, isinyithi 304 somlawuli woxinzelelo, isilawuli sesinyithi 201 isilawuli soxinzelelo, umlawuli woxinzelelo lobhedu, i-nickel yatywina umlawuli woxinzelelo lobhedu, i-nickel yatywina umlawuli woxinzelelo lobhedu, isinciphisi soxinzelelo lwentsimbi, isinciphisi soxinzelelo lwentsimbi.
Ukusetyenziswa kwesinciphisi soxinzelelo kufuneka kulandele le mithetho ilandelayo:
1. Intshukumo kufuneka icothe xa ichitha isilinda yeoksijini okanye ivula isinciphisi soxinzelelo. Ukuba isantya sokuvula ivalve sikhawuleze kakhulu, iqondo lobushushu begesi kwindawo yokusebenza yesinciphisi soxinzelelo lenyuka kakhulu ngenxa yoxinzelelo lwe-adiabatic, enokubangela ukuba iinxalenye ezenziwe ngezinto eziphilayo ezinje ngokupakisha irabha kunye neerabha zebhasiketi ezinemicu yokubamba umlilo kunye nokutsha. Isinciphisi soxinzelelo sitshiswe kwaphela. Ukongeza, ngenxa yentlantsi emileyo eveliswe kukusilela okukhawulezayo kunye nebala leoyile lokunciphisa uxinzelelo, iya kuthi ibangele umlilo kwaye itshise iinxalenye zesinciphisi soxinzelelo.
2.Isilinda yeoksijini kufuneka icothe xa ichaphazela okanye ivula umlawuli woxinzelelo. Ukuba isantya sokuvula ivalve sikhawuleza kakhulu, iqondo lobushushu begesi kwindawo yokusebenza yomlawuli woxinzelelo lonyuka kakhulu ngenxa yoxinzelelo lwe-adiabatic, enokubangela ukuba iinxalenye ezenziwe ngezinto eziphilayo ezinje ngokupakisha irabha kunye neerabha zebhasiketi ezinemicu yokubamba umlilo kunye nokutsha. Isinciphisi soxinzelelo sitshiswe kwaphela. Ukongeza, ngenxa yentlantsi emileyo eveliswe kukusilela okukhawulezayo kunye nebala leoyile lokunciphisa uxinzelelo, iya kuthi ibangele umlilo kwaye itshise iinxalenye zesinciphisi soxinzelelo.
3. Amanyathelo okhuseleko ngaphambi kokufaka isilawuli soxinzelelo naxa uvula ivalve yesilinda yegesi: Phambi kokufaka isilawuli soxinzelelo, cofa kancinci ivalve yebhotile uvuthele ubumdaka ukuthintela uthuli nokufuma kungene kwisinciphisi soxinzelelo. Xa uvula ivalve yesilinda yegesi, indawo erhasi yevalufa yesilinda akufuneki ijolise kumqhubi okanye abanye ukuthintela igesi ephezulu ekubalekeni ngokukhawuleza ize yenzakalise abantu. Indibaniselwano phakathi kokuphuma komoya kwesilawuli soxinzelelo kunye nombhobho werabha yerhasi kufuneka uqiniswe ngentambo yentsimbi eqhotyoshelweyo okanye uqinisa ukuthintela ubungozi bokuqhawuka emva kokubonelelwa komoya.
4. Isilawuli soxinzelelo kufuneka sitshekishwe qho, kwaye nesilinganisi soxinzelelo kufuneka sitshekishwe qho. Oku kwenzelwa ukuqinisekisa ukuthembakala kommiselo woxinzelelo kunye nokuchaneka kokufundwa kovavanyo lwegeji. Ukuba ufumanisa ukuba isinciphisi soxinzelelo sinokuvuza komoya okanye inaliti yokulinganisa uxinzelelo ayisebenzi ngokufanelekileyo ngexesha lokusetyenziswa, kufuneka ilungiswe ngexesha.
5.Ukhenkciswa kwesinciphisi soxinzelelo. Ukuba isinciphisi soxinzelelo sifunyenwe sinqabile ngexesha lokusetyenziswa, sebenzisa amanzi ashushu okanye umphunga ukuwunyibilikisa, kwaye ungaze usebenzise idangatye okanye intsimbi ebomvu ukubhaka. Emva kokuba isinciphisi soxinzelelo shushu, amanzi aseleyo kufuneka avuthelwe.
6. Isinciphisi soxinzelelo kufuneka sigcinwe sicocekile. Isicinezeli soxinzelelo akufuneki singcoliswe ngamafutha okanye ubumdaka. Ukuba kukho igrisi, kufuneka isulwe ngaphambi kokuba isetyenziswe.
7. Ukunciphisa uxinzelelo kunye nezilinganisi zoxinzelelo lweegesi ezahlukeneyo mazingatshintshiswanga. Umzekelo, izilawuli zoxinzelelo ezisetyenziselwa ioksijini azinakusetyenziswa kwiinkqubo ezinje ngeasithilini kunye nepetroleum gas.